Ngemuva-Sales Service-NINGBO CHEM-PLUS & JW FILM
UMnyango Wethu Wokuthengisa uzokusiza uma unemibuzo noma izinkinga.
Iwaranti ihlanganisa: ukunciphisa, ukuqhekeka, ukushaya nokuqaqamba. Le waranti ayihlanganisi ukuguga komkhiqizo, ukugqwala kwangaphandle, ingozi, ukushayisana nanoma yiluphi uhlobo lokulimala okwenziwe ngamabomu okubangelwa amandla angaphandle.
IKPAL Paint Protection Film kufanele ibekwe endlini yokugcina umoya. Ithempelesha yegumbi kufanele ibe phakathi kuka-20 ℃ no-28 ℃, futhi umswakama kufanele ube ngu-50-70%.
Izinyathelo zokuqapha ukusetshenziswa kwefilimu yokuvikela upende:
1. Gwema ukugeza imoto kungakapheli isonto elilodwa ngemuva kokufaka ifilimu ukuqinisekisa ukunamathela okuhle phakathi kwengcina nopende;
2. Lapho uhlanza imoto, gwema ukusebenzisa isibhamu samanzi esinamandla okugeza imiphetho yolwelwesi;
3. Lapho uhlanza imoto, gwema ukusebenzisa amabhulashi namakhemikhali abhubhisayo;
4. Gwema izinto ezinzima ukuklwebha nokukhuhla ingaphezulu lefilimu kanzima. Imikhondo yokuklwebha nokuhuzuka izothinta umphumela wefilimu
5. Kunconywa ukwenza ukunakekelwa okujwayelekile ebusweni be-membrane njalo ezinyangeni ezimbili;
6. Akunconywa ukupenda endaweni engaphezulu kwefilimu;
7. Amandla emisebe ye-ultraviolet elangeni lasehlobo anamandla kakhulu. Ungayipaki imoto yakho ngaphandle isikhathi eside bese uyibeka elangeni;
8. Ungayipaki imoto yakho ngaphansi kwesihlahla, ngaphandle kwalokho kuzoba nenqwaba yeguano shellac glue enamathela ebusweni be-membrane, ebola kakhulu futhi elula ukulimaza ingubo engaphezulu yolwelwesi;
9. Ungayipaki imoto yakho ngaphansi kwesiphepheli se-exhaust se-range hood isikhathi eside, ngaphandle kwalokho kuzoba namabala amaningi kawoyela ebusweni be-membrane, okungelula ukuyihlanza;
10. Ungayipaki imoto yakho isikhathi eside endaweni econsa indawo yokuphephetha umoya. Amanzi ashubisa umoya ongahle alimaze isakhiwo sengubo yefilimu;
11. Ungayipaki imoto emvuleni isikhathi eside, i-asidi esemvuleni izokonakalisa ulwelwesi ebusweni;
12. Uma isetshenziswa njengemoto yomshado, ungayinamathisi inkomishi yokudonsa ngqo ebusweni be-membrane; amaribhoni emoto yomshado, iziqhumane neziqhumane kungadala ibala kalula ebusweni bolwelwesi, futhi kudinga ukuhlanzwa nokunakekelwa kungakapheli amahora ayi-12;
Uma kunesidingo, iqembu le-KPAL lizosebenzisana nawe esikhathini esifushane kakhulu ukunakekela izingqinamba zakho.
Sicela usinikeze le mininingwane elandelayo:
· Isithombe senombolo yefilimu, evame ukuthunyelwa ngaphakathi komgogodla, futhi usazise ngemodeli ethengiwe
· Amavidiyo noma izithombe ezibonisa inombolo yepuleti yelayisense nezinkinga ngefilimu esemotweni
· Imodeli yemoto nonyaka